Home Wararka Gudaha Baarlamaanka Maraykanka oo ansixiyey in Ukraine lagu caawiyo $40 Bilyan
WASHINGTON DC – Golaha Senate-ka ee Maraykanka ayaa ansixiyey xidhmo lacageed oo gaadhaysa illaa $40 bilyan taas oo lagu caawinayo dalka Ukraine. Qaraarkan ay sida aqlabiyadda ah u ansixiyeen golaha Senate-ka ayaa haatan loo gudbinayaa aqalka cad si uu u saxeexo madaxweyne Joe Biden.
Xidhmadan lacageed ayaa loogu talo galay in lagu caawiyo dalka Ukraine shanta bilood ee soo socota si ay awood ugu yeeshaan inay iska caabbiyaan duullaanka uga imanaya dalka Ruushka. Lacagtan la siinayo Ukraine, waxaa ku jirta qayb loogu talo galay in dalkaas lagaga gacansiiyo dhinaca qalabka ciidamada, tababarada, hubka iyo weliba qaybo loogu talo galay dhinaca gargaarka bini’aadanimo.
Taageeradan la siinayo Ukraine, waxaa sidoo kale ku jirta qayb loogu talo galay in dalkaas lagaga caawiyo dhinaca wax soosaarka beeraha, si loo yareeyo cunto yarida ka jirta dunida maadaama dalkaasi ka mid yahay dalalka ugu horreeya dhinaca dhoofinta sarreenka.
Kaalmadan waxaa ogolaaday 86 senator oo ka mida 97 senator oo codeeyey, taas oo muujinaysa sida golaha Senate-ku uu isugu raacay qaraarkan. Xidhmadan la ansixiyey ayaa ku dhowaad $7 bilyan oo dollar ka badan, intii uu hore u soo jeediyey madaxweyne Biden, hase ahaatee madaxweynaha ayaa sheegay inuu taageerayo kaalmo kasta oo la siinayo dalka Ukraine, uuna saxeexayo marka ay xafiiskiisa soo gaadho.
Previous articleMaxaa keenay inuu ‘kaco’ xafiiskii shirkadda Google ee dalka Ruushku?
Next articleWareysi: Xasaasi ah! Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble
Soomaaliya ayaa ka sare martay dalka Iceland oo ku yaalla qaaradda...
40; kun oo Arday oo maanta u fadhiisatay Imtixaanka Shahaadiga ee...
Sidee Puntland xubin uga weydey Guddiga dib u eegista Dastuurka ee...